हामी विद्यार्थीको कुरा कसले सुन्छ सरकार ?
सोनिका खनाल । प्रकाशित मिति : शुक्रबार, माघ २५, २०७५
काङ्ग्रेस हिजो-आज आन्दोलनमा व्यस्त रहेको छ । हरेक गाउँ जिल्लाबाट न्यायका लागि बोल्न अगाडि सरेको काङ्ग्रेसको नारा वा माग हजुरले थाहा पाउनु भएकै छ । बेला बेला शैक्षिक हड्ताल लगायत विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु भने सुन्न पाइएको छ । यसरी जनतालाई दुःख दिई न्याय पनि दिने होकि फेरि सांसद भवनको ढोका ढकढक गर्नुभन्दा पहिला नै मेलमिलाप हुने हो ? प्रश्न काङ्ग्रेस सरकारलाई ? गठवन्धनको सरकारले वा ओलि सरकारले माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारि रहने काङ्ग्रेसले बताएको छ । तर त्यो साच्चै पूरा गर्ने लक्ष्यमा होकि हुकुमको एक्का भने जस्तो काङ्ग्रेस सरकार बनाउनको लागि मात्र हो ?
न्यानका लागि बोल्नु राम्रो हो तर हामी जस्ता बिध्यार्थी पठनपाठनमा अवरोध, सवारी साधन बन्द, सरकारी काममा अस्थिरता, बिहान बेलुकी काम गरेर भोको पेट पाल्ने मजदुर, गरीब किसानहरु ज्यामी किसानहरुका लागि पनि मध्यनजर गर्दै अगाडि जानू उपयुुक्त हुन्छ । न्याय दिनको लागि अन्याय सिर्जना गर्नु र नकारात्मक असर दिनु राम्रो होइन । त्यसैले न्यायको लागि हामी बिध्यार्थी पनि सडकमा उत्रिन तयार छौं । तर ब्यबस्थित र अरुलाई जनताको जीवनमा असर नगर्ने गरि । सम्बन्धित निकायसम्म ध्यान जाने गरि । एउटाको लागि हजारौं नेपालीले दुःख पाउनु राम्रो होइन । तै पनि के थाहा त्यो सब जनताको लागि हुनेछ भन्ने ? जनताको भरोसा तोडेको जुन सरकार छ । हजारौं सुख सुबिधा रहेको मुलुक नेपाल पनि हो । तर भ्रष्टाचार मौलाएको बेला सरकारले मुलुकलाई सहि दिशा तर्फ लान सकेन । सयौं रोजगार सिर्जना गर्ने ठाउँ छ । तै पनि सरकारले दिन सक्ने र लाखौं युवा बिदेशीन बाध्य भएका छन् ।
नेताका आखाँ सांसद भवनमा रहेका विभिन्न पदका कुर्सीमा रह्यो । झगडा गर्दै पद लिए तर केही गर्न सकेनन् देश र जन्ताको लागि । बिदेशी युवाले गरेको दुख हेरि रहे । तर केही गरेन् । बिदेशी रेमिटेन्समा देश बनाउन लाग्ने भ्रष्ट बुद्धि भएको सरकार भन्यै या पद ओगटि सांसद भवनमा पेट पल्टाएर वा जाडोको घाम ताप्दै बसेका नेता ज्युहरु प्रश्न यो होकि न्याय कसले मात्र पाउने हो ? किन भने कानुनमा त भेदभाव नगरीकन न्याय दिने ब्यवस्था छ तर लागू भएन नि ? किनकि निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड खुल्न अझै सकेन किन त ? किन हजुर हजुरको पावर जान्छ या नाम खराब होलान् भनि डरले ? ३३ किलो सुन काण्ड बाहिर आउन नपाउदै दबाइयो किन ? पावर र पोस्टमा हुनेलाई त कुनै कानुन हुन्न जस्तो देखिन्छ नि ? निर्दोस् बोल्न नसक्ने पावर नभएको जनताको लागि मात्र हो सजाय र कानुन ??
यसरी देश बनाउने बेलामा नेता सुतेर बसेको किन ? सभा समाहरोहमा पुग्दा ठुला ठुला भाषण किन दिनु पूरा गर्न नसक्नेले ? भोट माग्न जादा कुन मुख लिएर जनताको घर दैलोमा जाने लाज लाग्दैन ? अझै पनि समय छ परिवर्तन तर्फ लाग्नुस नेताहरु । साच्चै केही गरि नाम राख्न कोसिस गर्नु छ भने । आन्दोलनमा उत्रिएका काङ्ग्रेस र अरु बाँकी पार्टी या सिङ्गो सरकार लिलामी नै गर्ने हो भने त्यो ३३ किलो सुनको खोजी गरी समात्नेनै हो भने बाइडवडिमा ४ अर्वको भ्रष्टाचार गर्नेलाई र लडाकु शिबिरमा ६ अर्व खानेलाई र आयल निगममा १८ करोड खानेलाई अनि एनसेलमा ६३ अर्व अनि बुढिगण्डकी को ९ अर्व खानेलाई समात्न तत्पर हुनुपर्यो । निर्मला पन्तलाई न्याय देऊ हिम्मत छ ? हैन भने गरिब जनताले बिदेशमा रगत, पसिना कमाएर ल्याउने रकम, गरिवको पसिना, बिध्यालयमा बिध्यार्थीको पढाइ, जनतालाई र जनताको न्यायलाई नलुट ।
सोनिका खनाल नुवाकोट, मदानपुर-९, बेल्कोटगढि नगपालिका
(नोटः मेरो मनमा लागेका जिज्ञासालाई प्रस्फुटन गरेकी हुँ । अन्यथा नलिन सबैमा अनुरोध गर्दछु ।)
विश्व मजदुर आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास–८